Gudiga diyaarinta Xeerarka sharciga Doorashoyinka Qaranka oo maanta la magacaabay +(SAWIRRO) – HalQaran.com
Gudiga diyaarinta Xeerarka sharciga Doorashoyinka Qaranka oo maanta la magacaabay +(SAWIRRO)
by HalQaran Staff	 March 24, 2020 20 Views
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddi wadajirka ku-meel-gaarka ah ee soo diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka Qaranka oo maanta yeeshay kulankoodii labaad ayaa ku doortay guddoomiye, guddoomiye ku xigeen iyo xoghayaha guddiga.
Kulanka waxaa shir guddoominaayay guddoomiye ku xigeenka kowaad ee Golaha Shacabka mudane Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudeey.
Waxaa sidoo kale goob joog ahaa hab-dhowraha Golaha Shacabka Xildhibaan Maxamed Cabdullahi Xassan Nuux.
Guddoomiyaha Guddi wadajirka ku-meel-gaarka ah ee diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka Qaranka ayaa loo doortay xildhibaan Ibraahim Yaroow Isaaq, halka Guddomiye ku xigeenka guddiga loo doortay senator Jawaahir Axmed Cilmi, iyadoo Xoghayaha guddiga loo doortay xildhibaan Lufti Shariif Maxamed.
Guddigaan oo ay horay u magacaabeen guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa shaqadoodu tahay sida ay u soo dhammaystir lahaayeen xeerarka muhiimka u ah sharciga doorashooyinka qaranka oo ay haray u ansaxiyeen labada aqal ee baarlamaanka, isla markaana uu saxiixay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulllahi Maxamed Farmaajo.
Ugu dambeyn, guddoomiye ku xigeenka kobaad ee Golaha Shacabka Mudane Abdiweli Sheekh Ibraahim Muudeey ayaa kula dardaarmay Guddi wadajirka ku-meel-gaarka ah ee diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka Qaranka in ay soo dadajiyaan xeerarka muhiimka u ah sharciga doorashooyinka qaranka.
#Guddiga diyaarinta Xeerarka sharciga Doorashooyinka Qaranka #la doortay #la magacaabay
Previous Post Wasiirka Amniga ee Somaliya ‘Islow’ oo beeniyay in ciidamo dowladeed la dul dhigay hoyga Sheekh Shariif Sh. Axmed
Next Post Puntland closes mosques, schools to stop spread of COVID-19